कोस्टा ब्लान्का: सुविधायुक्त मौसम, स्मारक सम्पदा र रमाईलो | Absolut यात्रा
Ifach को रक
कोस्टा ब्लान्का समुद्री किनारमा करिब दुई सय किलोमिटरसम्म फैलिएको छ स्पेनिश लिफ्ट। यसलाई यो नाम यसको स्पष्ट बालुवा र क्रिस्टल सफा पानीको समुद्र तटहरूको लागि प्राप्त हुन्छ, तर यसको गाउँहरूका लागि पनि सेतो धुने घरहरू र चट्टान हेडल्यान्डहरू। तपाईं यसमा रमाउन सक्नुहुन्छ एक वर्षमा लगभग तीन सय दिन घाम र सत्रह डिग्रीको औसत निरपेक्ष तापमान।
कोस्टा ब्लान्काले तपाईंलाई प्रदान गर्ने सुन्दर प्राकृतिक पार्कहरू, सम्पन्न र विस्तृत इतिहासको विस्तृत स्मारक सम्पदाको फल, विस्तृत होटल प्रस्ताव र स्वस्थ जस्तो स्वादिष्ट स्वाभाविक र अन्य स्वाभाविक स्वामित्वका अन्य सुविधाहरू हुन्। यस्तो सम्भावना छैन कि प्रत्येक वर्ष लाखौं स्पेनिश र विदेशी आगन्तुकहरू आफ्नो छुट्टीको आनन्द लिन यसमा यात्रा गर्छन्। यदि तपाईं उनलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई हाम्रो अनुसरण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 कोस्टा ब्लान्काको शहरहरू
1.8 सान्ता पोला
1.10 अन्य स्थानहरू
2 कोस्टा ब्लान्कामा मौसम
3 कोस्टा ब्लान्काको विशिष्ट उत्सवहरू
4 कोस्टा ब्लान्काको ग्यास्ट्रोनमी
5 कोस्टा ब्लान्कामा कसरी पुग्ने
कोस्टा ब्लान्काको शहरहरू
हामीले भनेझैं, कोस्टा ब्लान्का लेभान्टिनको तटमा झण्डै दुई सय किलोमिटरसम्म फैलिएको छ र यसका नगरपालिकाहरू पनि सामेल छन्। Alicante प्रान्त जुन मर्सियाको समान सिमानासम्म आइपुग्छ। सबैभन्दा चाखलाग्दो हेरौं।
यो आवश्यक छ कि हामी आफ्नो यात्रा यस प्रान्तको राजधानीबाट शुरू गर्नुपर्दछ। पोसिटिग्युट, सान जुआन, ला अल्बुफेर्टा वा अगुमारगा (पछि कुकुरहरूका लागि अनुकूलित) जस्ता समुद्री तटहरूमा, एलिसेन्टले तपाईंलाई उत्कृष्ट स्मारक सम्पदा पनि देखाउँदछ।
यसको प्रतीकहरू समावेश गर्दछ सान्ता बार्बराको महल, एक अरब भवन चौधौं र अठारहौं शताब्दी बीच ईसाईहरूले पुनर्निर्माण र जुन यूरोप मा सबै भन्दा ठूलो दुर्ग को एक हो। तपाइँले पनि भ्रमण गर्नुपर्दछ सैन निकोलस डे बारीको सह-कैथेड्रल, सत्रौं शताब्दीमा हेरेरियन रेनेसाँस शैलीमा निर्माण गरिएको र पन्ध्रौं शताब्दीको क्लिस्टर छ; को पवित्र अनुहारको बारोक मठ वा सान्ता मारियाको बेसिलिका.
सान्ता बार्बराको महल
त्यस्तै, एलिसान्टको एक आकर्षण यसको हो दरबारहरू र महान घरहरू। पहिलो मध्ये, ग्रेभिना, माईसनभ र पोर्टलेटका ती सबै १ the औं शताब्दीका थिए। र दोस्रो बीचमा, ला एसेगुराडा हाउसको वर्तमान समकालीन कला संग्रहालय, वा नगर परिषद। जब तपाईं १ter औं शताब्दीमा निर्मित उत्तरहरूको भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाईको दिमागमा एक उत्सुकता छ: यो समुद्री सतहभन्दा माथि शून्य उचाइमा अवस्थित छ र स्पेनको कुनै पनि भागमा उचाइ नाप्दा सन्दर्भको रूपमा काम गर्दछ।
तर तपाई अलिकान्टेमा अझ आधुनिक निर्माणहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यस अर्थमा, केन्द्रीय बजार र लोन्जा बाहिर उभिए, बीसौं शताब्दीको शुरुका दुई आधुनिकतावादी भवनहरू; को सैन फर्नान्डोको महल, १ th औं शताब्दीबाट, र मुख्य थिएटर, एक समान शताब्दीको मध्यबाट एक नियोक्लासिकल भवन।
अन्तमा, ला अल्बुफेर्टाको क्षेत्रमा तपाई इबेरियन-रोमन शहरको अवशेष देख्न सक्नुहुनेछ लुसेन्टम, जसका धेरै टुक्रा प्रान्तीय पुरातात्विक संग्रहालयमा छन्, जहाँ तपाईं पनि हेर्न सक्नुहुन्छ Cabezo Lucero को महिला, स्पेनमा सब भन्दा सान्दर्भिक Iberian मूर्तिकलाहरू मध्ये एक।
यस शहरले एक साँघुरो सडकको साथ पुरानो शहरको साथ, पर्यटनको बावजूद माछा मार्ने गाउँको आकर्षण कायम गर्न मद्दत गरेको छ। को मोन्टगे मासिफ यसले यसलाई सुरक्षित गर्दछ र यसबाट तपाईं कोस्टा ब्लान्काको अद्भुत दृश्यहरूको मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ। स्पष्ट दिनमा पनि तपाई इबीजाको रूपहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
यसको स्मारकहरु मध्ये, महल, मुस्लिम समयमा निर्माण र एक promontory मा स्थित जसको ढलानहरु को पुरानो रोमी शहर को अवशेष हो डायनियम। तपाईं महलको संग्रहालयमा यो पुरातात्विक साइटबाट झिकिएका टुक्राहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
डेनिया र मोन्टगे मासिफ
तपाईंले टाउन हलको नियोक्लास्टिक भवन पनि भ्रमण गर्नुपर्नेछ; को बेन्ित्साइनाको सुदृढ घर, १ XNUMX औं शताब्दीबाट र सांस्कृतिक चासोको साइट घोषित गरियो; को धारणा को बारोक चर्च; सान जुआन र सान्ता लुसियाको हर्मिटेजेसहरू र अल्माड्राबा र गेरो जस्ता तटवर्ती रक्षा टावरहरू।
अन्तमा, तपाइँ समुद्री तटहरू र लोभ मजा लिन सक्नुहुन्छ जस्तै ला मारिनेता क्यासियाना र लेस मरीनको जस्ता। र मा हिंड्न नबिर्सनुहोस् Baix la Mar पड़ोस, यसको सेतो धुने मछुवाहरूको घरहरू र यसको रेस्टुरेन्टहरूको साथ।
जाभामा तपाईसँग सुन्दर पुरानो सहर छ, साना साना घरहरू र मध्यकालीन महलहरू छन्। यद्यपि यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्मारक प्रभावशाली छ सैन बार्टोलोमेको गढी चर्च, चौधौं र सोह्रौं शताब्दी बीच बनाइएको र जसको घण्टा टावर क्षेत्र देखि सबै देखिन्छ। यो एक राष्ट्रीय कला स्मारक हो।
थप रूपमा, तपाईं शहरको मध्यभागमा जाभामा आर्नल समुद्री किनारको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, र सबै भन्दा माथिल्लो पैदल यात्राको मार्गहरू लिनुहोस् जुन दृश्यहरूका लागि डोर्‍याउँछ। मोन्टगे प्राकृतिक पार्क, जसका विचारहरू हामी पहिले नै तपाईंसँग पहिले नै बोलेका छौं।
प्रभावशाली अन्तर्गत आश्रय Ifach को रककोस्टा ब्लान्का को महान प्रतीक मध्ये एक, Calpe को शहर पचास हजार वर्ग मिटर प्राकृतिक पार्क को लागि बाहिर खडा छ कि यो चट्टान जन बनाउँछ। यो दुबै आरोहण र डाइभि .को लागि उत्तम स्थान हो। तर यसले तपाइँलाई लेभेन्टे, अरेनल-बोल र क्यान्टल बोइग जस्ता शानदार तटहरू पनि प्रदान गर्दछ।
यसको स्मारकहरूको लागि, तिनीहरू बाहिर उभिन्छन् रानीको स्नानगृह, रोमन समयका केही माछा नर्सरीहरू; को क्यासल डेल मस्काराट, एक १th औं शताब्दीको वाचटावर जुन सांस्कृतिक चासोको साइट हो, र ला कासानोभा, १ XNUMX औं शताब्दीको सुरुतिरको ग्रामीण घर।
छ किलोमिटर तटवर्ती रेखासहित कोभ र चट्टानहरूलाई वैकल्पिक बनाउँदछ, अल्तेया सुन्दर शहर हो। यसको पुरानो भाग, को रूपमा परिचित फोर्नेट यो काब्ल्ड सडक र साना सेतो ल्याटिस घरहरू मिलेर बनेको छ जसको फूलहरू सजिएको छ। साथै यसको पोर्ट धेरै सुन्दर छ।
समुद्र तटहरूको लागि, तपाईं ला रोडा, ला ओल्ला र क्याप नेग्रेको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यससँग तीन न्युडिस्ट समुद्री किनारहरू पनि छन्: मस्कराट नोर्टे, ला सोलसिडा र काला डे ला बरा ग्रान्डे।
अन्तमा, तपाईं Altea मा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ Discalced Carmelites को गुम्बा चर्च; को गलेरा टावर, जो सांस्कृतिक चासोको सम्पत्ति हो; बहुमूल्य अर्थोडक्स गिर्जाघर, जसले १ XNUMX औं शताब्दीको रूसी मन्दिर, वा क्यासल डेल फेस्टेरो संग्रहालयको नक्कल गर्दछ, जहाँ तपाईं मोर्स र क्रिश्चियन उत्सवहरूको विशिष्ट पोशाक देख्नुहुनेछ, जुन हामी पछि हेर्नेछौं।
हामीले तपाइँलाई बेनिडर्मको बारेमा बताउन आवश्यक छैन, स्पेनको महान पर्यटन स्थलहरू मध्ये एक। दुई शानदार तटहरू, लेभान्ते र पोनिटेको साथ, दृष्टिकोणले छुट्टिएर यसको रूपमा बप्तिस्मा लिए भूमध्य बालकनी, यसको बाहिर खडा छ रातको जीवन, असंख्य डिस्कस, पब र बारहरूको साथ।
तर तपाइँ बेनिडर्ममा तीन पाउन सक्नुहुन्छ थीम पार्क: टेरा मटिका, एक ऐतिहासिक आधारको साथ; अक्वालान्डिया, विशाल स्लाइड्स र मन्डोमरले जनावरहरूको निरीक्षण गर्न। तपाईंले रोमन साइट पनि हेर्नुपर्नेछ टोसाल डे ला काला; पौंटा डेल क्याभल टावर, जो सियरा हेलाडा प्राकृतिक पार्कमा अवस्थित छ, र स्यान जैमे र सान्ता आनाको चर्च, १oc औं शताब्दीमा नियोक्लासिकल शैलीमा निर्माण गरियो।
अन्तमा, बेनिडर्मको अर्को ठूलो आकर्षण हो टापु, जो खाडी अनुहार र एक राम्रो पौराणिक इतिहास छ। विशाल रोल्डन बिरामी परेकी एउटी महिलालाई असाध्यै माया गर्थे। केवल सूर्यको किरणहरूले यसलाई पुनः प्राप्त गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। रोल्डनले पुइग क्याम्पानाको पहाडमा मुक्का मारिदिए र यसको केही अंश समुद्रमा खसे (एउटा टुप्पो आज पनि पहाडमा देख्न सकिन्छ), टापु बनाउँदै, जसमा सूर्यले केही मिनेट पछि घाम डुबायो।
यस शहर को पुरानो शहर बनाउँछ La Vila को ऐतिहासिक - कलात्मक परिसरजहाँ शानदार रेनेसान्स भित्ता र धारणा को गोथिक चर्च। तपाईंले सेन्टेला च्यालेट, एक चुनावी शैलीको शहरी दरबार, र समुद्री तटमा बगैंचा टावरहरू पनि देख्नुपर्नेछ जुन तटमा बार्बरी समुद्री डाकुहरूको आगमनको रक्षा गरिएको थियो। ती मध्ये एगुइली र डल्टको हो।
तर विलाजयोजोसा यसको विस्तृत रोमी सम्पदाको लागि सबैभन्दा माथि छ। को एलोनको रोमन स्नानगृह, मल्लाडेटा अभयारण्य र सन्त जोसेप टावर यसका तीन मुख्य तत्वहरू हुन्। समुद्र तटहरूको सन्दर्भमा, तपाईंसँग तिनीहरूको ठूलो संख्या शहर र यस वरपर छ। पारासो, बोल नउ र एस्टुडियान्ट्स बीच उभिए।
तपाईं यो शहर मा पनि जानु पर्छ पोर्टस इलिसिटानसको भग्नावशेष, ईबेरियन साइट ईसापूर्व चौथो शताब्दीको हो जुनमा रोमन कारखाना निर्माण गरिएको थियो। यी सबै अवशेषहरू मध्ये, क्याटा डेल पाल्मेरल, ल्याटिन अवधिबाट मोज़ेकहरूको साथ एक भिला, बाहिर खडा छ। सान्ता पोला पनि मा बाहिर खडा छ महल-किल्ला, १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्मित र यसमा दुई संग्रहालयहरू छन्: सागर संग्रहालय र मत्स्य संग्रहालय।
प्रकृति सम्बन्धी तपाईसँग भव्य समुद्री किनारहरू जस्तै तामारिट, वरदेरो र लिसा, ती सबै पूर्णरूपले सुसज्जित छन्। र पनि अचम्मको लास सालिनास प्राकृतिक पार्क, चराहरूको लागि विशेष सुरक्षा क्षेत्रको रूपमा सूचीबद्ध।
यहाँ पनि तपाइँ एक प्राकृतिक पार्क पाउनुहुनेछ, लागुनास डे ला माता र टोरेभिएजाकोजुन शताब्दीयौंसम्म नुन थियो र अहिले चराहरूको प्रवासमा आधारभूत क्षेत्र हो। यसको समुद्री तटहरूमा, लस लोकोस, एल कुरा, ला मटा र डिक डी लेभान्ते बाहिर उभिए। तर सबै भन्दा माथि, काबो सेवेराको हो, केवल यसको गुणहरूको कारणले गर्दा होईन, तर किनभने त्यसमा थप विशेष रूपमा मोरो टावरतपाईंले एक शानदार दृश्य पाउनुहुनेछ जुन तपाईंलाई कोस्टा ब्लान्काको अद्भुत दृश्य प्रस्ताव गर्दछ।
जे भए पनि तपाई कोस्टा ब्लान्का जस्ता शहरहरू पनि आनन्द लिन सक्नुहुनेछ अलबीर, यसको सुन्दर लालसाका साथ; एल क्याम्पेलो, Iliana को Iberian खंडहर संग; गार्डमार डेल सेगुरा, पाइन रूखहरूको यसको विशाल विस्तारको साथ, र पिलर डे ला होराडाडा, पहिले नै मर्सिया प्रान्तको सीमामा। बिर्सनु बिना ती सबै टाबारका टापु, जसको पानीले भूमध्य सागरको समुद्री रिजर्वको कोटी राख्छ, यसको जैव विविधता जीव र वनस्पतिको कारण।
कोस्टा ब्लान्कामा मौसम
कोस्टा ब्लान्काको एक ठूलो फाइदाहरू यसको भव्य मौसम हो। यदि तपाइँ यसमा यात्रा गर्नुहुन्छ, तपाइँ व्यावहारिक रूपमा सूर्य र राम्रो मौसम बीमा लिइरहनुभएको छ। वास्तवमा, एक बर्षको दिन जुन यो चम्किन्छ लगभग तीन सय हुन्छ, जुन तपाईलाई बिचको धेरै घण्टा ग्यारेन्टी गर्दछ।
यस क्षेत्रको एक छ विशिष्ट भूमध्य जलवायु। तसर्थ, तापमानको मामिलामा र थोरै वर्षाको साथ धेरै हल्का। हिउँदहरू असाध्यै रमाइलो हुन्छन्, न्यूनतमको बारेमा पाँच डिग्री र अधिकतम पन्ध्र। अंश मा, यो किनभने frosts धेरै दुर्लभ छ।
ग्रीष्म hotतु तातो छ र tr० डिग्री माथि र उष्णकटिबंधीय रातहरू माथि विरलै बीस भन्दा कम ड्रप संग। तपाईले देख्नुहुनेछ कि तापको अनुभूति क्षेत्रको आर्द्रताले तीव्र पार्दछ। जब यो तटमा आउँछ, यो सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, वर्षा धेरै दुर्लभ छ, वसन्त र शरद concentतुमा केन्द्रित। तथापि, तथाकथित चिसो ड्रपजुन वर्षाको महीनामा पनि हुन्छ। यो धेरै छोटो अवधिमा वर्षाको अत्यन्त प्रचलित गिरावट हो, जुन प्राय: बाढी आउँछ।
तसर्थ, तपाइँलाई कोस्टा ब्लान्का भ्रमण गर्नका लागि सबै भन्दा राम्रो महिनाहरू हुन् वसन्तधेरै रमाइलो तापक्रमको साथ। न त तपाईंले वर्षाको बारेमा चिन्ता लिनु पर्ने हुन्छ किनकि यद्यपि यो वर्षा iestतुमध्ये एक हो, यो सुख्खा मौसम भएको हुनाले पनि विरलै छ।
कोस्टा ब्लान्काको विशिष्ट उत्सवहरू
सबै लेभान्तेहरूमा जस्तै, आगोसँग सम्बन्धित चाडपर्वहरूको कोस्टा ब्लान्कामा लामो परम्परा छ, विशेष गरी सन्त जोनको बोनफायर। अधिक विशिष्ट छन् घरहरू र इसाईहरू उत्सवहरू, जुन प्राय सबै शहरहरु मा आयोजित र एक र अर्को बीच एक लडाई पुनः आयोजित छन्। विशेष गरी विलाजयोसा ती प्रसिद्ध छन्।
अर्कोतर्फ, एल्चे शहर कोस्टा ब्लान्का सम्बन्धी नभए पनि यसको नगरपालिका अवधि यसमा सामेल छ। र यसमा स्पेनमा सबैभन्दा मौलिक चाडहरू मध्ये एक ठाउँ लिन्छ। त्यसको बारेमा एल्चेको रहस्य, जसले भर्जिन मरियमको धारणा र राज्याभिषेकलाई पुन: निर्माण गर्दछ र मानवताको मौखिक र अमूर्त विरासत हो।
कोस्टा ब्लान्काको ग्यास्ट्रोनमी
सबै स्पेनिस लेभन्तेहरूमा जस्तै, कोस्टा ब्लान्का यसको द्वारा चित्रित छ चामल, जुन धेरै विविध तरिकामा तयार गरिन्छ। तर पनि फलफूल र सब्जिहरु ती तपाईको भान्छामा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छन्। यो मुचामील टमाटरको मामला हो, एलिसान्ट माउन्टेन चेरी, एल्चे अनार वा सेओरा डि गार्डमार।
यस क्षेत्रको विशिष्ट भाँचे माझ्ने चामलहरू क्रस्ट वा पट्टी सहित खरायो र घोंघा वा सिमी र शलजमको साथ छन्; ताजा माछा भुटेको, ग्रील्ड वा स्टु जस्तो बोलीटोरी वा भेडा, र समुद्री खाना, रातो झींगाको विशेष महत्त्वको साथ। तर पकाइएका बलहरू, तिनीहरूले एक ठूलो मीटबल बोक्छन्; को gazpacho र farinettes वा दलिया।
र, डेसर्टको रूपमा, Alicante toña, the Jijona nougats, the ब्राण्डी रोल विलाजुयोसा वा को आइसक्रीम र meringue दूध। पेय सन्दर्भमा, टाइगर नट मिल्क हिला, Vinalopó वाइन र anise लिकुअर्स हर्बेरो वा कफी मन पर्छ बुरेट.
कोस्टा ब्लान्कामा कसरी पुग्ने
कोस्टा ब्लान्कासँग अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ, डेल अल्टेट। तपाईं एलिकन्टेमा पुग्न पनि सक्नुहुनेछ रेल बाट, यो AVE लाईन जो यो शहरलाई म्याड्रिडको साथ जोड्दछ। क्षेत्र मा एक पटक, तपाईं सडक द्वारा A-38 मोटरवे मार्फत सार्न सक्नुहुन्छ, जुन बाट बग्छ भ्यालेन्सिया Pilar de la Horadada लाई।
तर तपाईले यसलाई अधिक ट्राम र रेल प्रयोग गर्न सजिलो लाग्न सक्छ ट्राम - एलिसान्टेको महानगर, जसले यस शहरलाई कोस्टा ब्लान्काको मुख्य शहरहरूसँग जोड्दछ। यसको प lines्क्तिहरू बीचमा9बाहिर खडा छ, को रूपमा चिनिन्छ Trenet डे ला मारिना, जसले बेनिडर्म र डेनिआलाई अल्फाज डेल पाई, क्याल्प, अल्टेया वा बेनिसा मार्फत जोड्दछ। अन्तमा, तपाईं बस वा ट्याक्सीबाट पनि वरपर जान सक्नुहुन्छ।
अन्तमा, कोस्टा ब्लान्काले तपाईंलाई बिर्सिने सबै चीजहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईंले अविस्मरणीय प्रवासको आनन्द लिन आवश्यक छ। तपाईंसँग यसमा पुग्नको लागि राम्रो संचार छ र यस मार्फत जानुहोस्। यो छ शानदार होटल प्रस्ताव। मौसमले तपाईंलाई सूर्यको ग्यारेन्टी दिन्छ। यसको विस्तृत र सुन्दर स्मारक सम्पदा छ र मानौं यी सबै पर्याप्त छैनन्, यसको पेट्रोनोमी उत्कृष्ट छ। तपाई यो हेर्न के लागी बस्दै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » कोस्टा ब्लान्का